प्रचण्ड–नेपाल समूह निर्वाचनसँग तर्सिएका छन्ः प्रधानमन्त्री
On: २०७७ माघ १६ गते, शुक्रबार, ०४:३७ बजे प्रकाशित
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह निर्वाचनसँग डराएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौं महानगर कमिटीद्धारा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रचण्ड–नेपाल समूह हार निश्चित हुने भएकाले निर्वाचनसँग डराएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘उनीहरु निर्वाचनसँग तर्सिएका छन्। चुनावबाट भागेका छन्। अहिले भागेर के गर्ने? डेढ वर्षपछि त जनताको बिचमा जानैपर्ला।’
ओलीले दाहाल–नेपाल समूह निकै अप्ठेरोमा परेको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे। उनले भने, ‘चुनावमा नजाऔँ भने लोकतन्त्र भन्ने ठाउँ रहँदैन। जाऔँ भने सबै सिङ फुक्लिएको छ। बाँकी रहेको सिङ पनि निर्वाचनमा भाँचिन्छ।’
ओलीले देशलाई सांसद किनबेचको थलो बनाउन खोज्नेलाई जनताले सजाय दिने बताए। त्यस्तै ओलीले माघ २३ गते देश र जनताका पक्षमा पहिलो चरणको शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्दै उनले भने, ‘माघ २३ गते पहिलो चरण जनप्रदर्शन काठमाडौंबाट थाल्दै छौँ। दुई चार लाख भेला गरेर देखाइदिएपछि उनीहरुले थाहा पाउनेछन्, शक्ति प्रदर्शन के हो? शक्ति प्रदर्शनको झल्को देखाउनुपरेको छ।’ उनले सो प्रदर्शनमा सहभागी हुन महिला, युवा, शिक्षक, पत्रकारलगायतलाई अनुरोधसमेत गरेका छ ।
अन्य सम्बन्धित समाचार: एमालेको विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी
२०७७ माघ १६ गते, शुक्रबार, ०४:३७ बजे प्रकाशित